बहु-स्थान व्यवसायहरूको लागि स्थानीय मार्केटि Strate रणनीतिहरू Martech Zone
अपरेटिंग एक सफल बहु-स्थान व्यवसाय सजिलो छ ... तर जब तपाईंसँग अधिकार हुन्छ स्थानिय बजार रणनीति! आज, व्यवसाय र ब्रान्डको डिजिटलाइजेशन को लागि धन्यवाद स्थानीय ग्राहकहरु भन्दा टाढा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने अवसर छ। यदि तपाईं एक ब्रान्ड मालिक वा संयुक्त राज्य अमेरिका मा व्यापार मालिक हो (वा कुनै पनि अन्य देश) सहि रणनीतिको साथ तपाईं विश्वभरिका सम्भावित ग्राहकहरूलाई तपाईंको उत्पादनहरू र सेवाहरू पिच गर्न सक्नुहुनेछ।
क्याम्पफायरको रूपमा बहु-स्थान व्यवसायको कल्पना गर्नुहोस् जहाँ तपाईंसँग एउटा ठूलो हब (वा बोनफायर) र धेरै सानो जडित स्थानीय मार्केटिंग हब छन्। यो संरचना को उपयोग गरेर, ग्राहकहरु लाई उनीहरु बस्ने ठाँउ पुग्न सजिलो हुन्छ।
तपाइँ कसरी तपाइँको टोलीलाई जलाए बिना बहु-स्थान व्यवसाय व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ?
व्यवस्थित गर्नुहोस् - दैनिक कार्यहरू, कर्मचारी ब्रेकहरू, र ग्राहक अनुरोधहरूको साथ जारी राख्न, तपाईंले प्रणालीगत दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक छ। तपाईंले अपरेटिंग प्रक्रियाहरू मापदण्डिक गर्नुपर्दछ र केवल एक स्थानको लागि मात्र होइन - तर तपाईंको सबै व्यापार स्थानहरूमा।
व्यवस्थापन (S) मार्दछ - तपाईले एक कडा कार्यबल बनाउनु भएको छ जो कि या त बहु-स्थान व्यवसाय चलाउन सक्दछ वा यसलाई बिग्रन सक्दछ। यो आवश्यक छ कि कुशल भण्डारकहरू भाडामा लिन यो निश्चित गर्न तपाईको स्टोरहरू तपाइँले चाहानुभएको तरिकाबाट चल्दछन्। राम्रो प्रबन्धकीय कौशलको शक्तिलाई हल्का नपार्नुहोस्।
सञ्चार - परिस्थितिहरू सम्हाल्ने कुञ्जी, तपाईंको व्यवसायिक दृष्टि विस्तार, र ग्राहकहरूसँग मूल्य साझा गर्ने कुराकानी हो। जडानहरू राख्नको लागि तपाईं टाउन हल बैठकहरू, द्वि-साप्ताहिक बैठकहरू, र जूम कलहरू लिन सक्नुहुन्छ। नियमित र सान्दर्भिक बैठकहरूले चीजहरूलाई तालमा राख्न मद्दत गर्दछ।
प्राथमिकताहरू - सही प्राथमिकता सेट गर्नु सबै परियोजनाहरूको %०% को सम्पन्नको बराबर हो। अनुसन्धानका अनुसार, बहु-स्थान व्यवसायहरू हप्ताको १ 50 घण्टा संचार दोहोर्‍याउने र स्पष्टिकरणमा खर्च गर्दछन्।
कामरेडशिप - हामी कोही पनि हामी सबै भन्दा बलिया छैनौं। त्यो एक अद्भुत उद्धरण हो र यो तपाइँको आदर्श वाक्य पनि हुन सक्छ! जब तपाईं एक बहु-स्थान को व्यवसाय चलाउँदै हुनुहुन्छ, चीजहरू धेरै सजिलो हुन्छ जब सबैलाई उनीहरूको भूमिका र जिम्मेवारीहरू थाहा हुन्छ। मानहरू instilling गरेर एक मजबूत टीम भावना निर्माण।
यो सरल राख्नुहोस् - सहि प्रविधि, लिवरेज अनलाइन उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईंको कार्यहरू सरल बनाउनुहोस्। तपाईं एक धेरै माईलस्टोन नक्शा छ जब तपाईं धेरै समय, ऊर्जा, र संसाधनहरू बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
बहु-स्थान व्यवसाय को चुनौतीहरू
बहु-स्थानमा जान चुनौतीपूर्ण छ। बहु-स्थान व्यवसायको साथ परियोजनाहरू र कार्यहरूको लागि आवश्यक संसाधनहरूलाई हल्का देखाउन यो सजिलो छ। यसका अतिरिक्त, व्यापार प्रणाली र विस्तारको लागि मार्केटि strategy रणनीति तयार गर्नमा विफलताले पनि नकारात्मक रूपमा कम्पनीको समग्र प्रदर्शनलाई असर गर्न सक्छ। बहु-स्थान व्यवसाय र ब्रान्डले सामना गर्ने प्राय सबै सामान्य चुनौतीहरू:
मंगनी - अनियमित व्यापार निर्णयहरू र अनस्ट्रक्टेड अन्तर्क्रियाले व्यवसायमा उनीहरूको टोल लिन सक्छ। यदि तपाईको प्रबन्धकले तपाईको चिंतालाई उस्तै वजन दिएन भने तपाईका कर्मचारीले अवसरहरु हराउनेछन्।
आदिवासी - बहु-स्थान व्यवसायमा, ठूलो तस्वीर साझेदारी गर्न यो चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। अर्को शब्दहरुमा, टोलीहरु र अफिसहरु बीच एकता को अभाव हुन सक्छ। पछि, उही मैदान आदिवासीत्वको ठाउँ हुन्छ; तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ एउटा टोली अफिसमा कार्यरत छ। अझै, वास्तविकतामा, त्यहाँ चार-पाँच मिनी टोलीहरू हुन सक्छन्। सबैलाई समान पृष्ठमा राख्नुहोस् वा अन्यथा यसले उपयोगी संसाधनहरूको खेर फाल्न सक्छ।
प्रदर्शन - बहु-स्थान व्यवसायको लागि एक हिचकीको काम कसरी गरिन्छ भन्नेमा स्पष्टता हो! कर्मचारीहरू कम देखिने भएकोले पर्यवेक्षणले चुनौती दिन सक्छ। नियमित प्रेरणा, सञ्चार, र अन्तर्क्रिया बिना कर्मचारीको प्रदर्शन अस्वीकार हुन सक्छ।
बहु-स्थान चलाउँदा डरलाग्दो लाग्न सक्छ, यो सफल हुन सम्भव छ। तपाईं एक स्थानीय मार्केटि strategy रणनीति सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको प्रत्येक स्थानको सुचारु रूपमा चालू रहन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ केही केहि प्लेटफर्महरू छन् जुन विशेष रूपमा बहु-स्थान व्यवसाय अपरेशनहरू, बिक्री, र मार्केटिंग प्रयासहरू प्रबन्ध गर्नका लागि निर्मित छ - निश्चित गर्नुहोस् तपाईंको होमवर्क गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस् उनीहरूले समर्थन, समग्र, र रणनीतियोंलाई स्वचालित स्थानहरूमा तपाईंले कार्यान्वयन गर्दै आएका रणनीतिहरूलाई।
यो लेखमा, म केहि रणनीतिहरु साझा गर्न को लागी साझा गर्न को लागी साझा गर्न को लागी तपाइँको बहु-स्थान व्यवसाय को मार्केटिंग को नियन्त्रण लिन सक्नुहुन्छ।
तपाईको बहु-स्थान कम्पनीहरूलाई अर्को तहमा लैजानको लागि दस स्थानीय मार्केटि T रणनीतिहरू
जियोटारगेटि - - चाहे यो ग्राहकको बानी, काम, र सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मको प्रयोगको बारेमा डाटा हो - डाटा एनालिटिक्स मा फर्केर तपाईं कार्यक्षम अंतर्दृष्टि निर्माण गर्न भूस्थानको उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। भू-लक्षित गरेर तपाईंको सम्भावना र ग्राहकहरू, तपाईंले तपाईंको समग्र राजस्व बढाउनुहुनेछ। यसबाहेक, तपाईं उही स्थानीय मार्केटि tact रणनीतिहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ग्राहकलाई अन्य स्थानीय ब्रान्डहरूसँग ओभरल्याप पत्ता लगाउन।
स्थानीय घटनाहरू - एक स्थानीय घटनाको आयोजन गरेर तपाईं ग्राहकहरूलाई तपाईंको ब्रान्डमा संलग्न हुन र अन्तरक्रिया गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय घटनाहरू तपाईंको व्यवसाय प्रवर्धन गर्नका लागि उत्तम तरिका हो, तर समुदायको लागि राम्रो गर्ने अवसर पनि खोल्नुहोस्।
अनलाइन समीक्षा - समीक्षा स्थानीय व्यवसायका लागि परिवर्तनकारी हुन्छ। नकारात्मक समीक्षाले पनि ब्रान्ड स्थितिमा भूमिका खेल्छ। तपाईं कसरी नकारात्मक समीक्षाको जवाफ दिनुहुन्छ एक सम्भावित ग्राहकलाई भुक्तान गर्ने ग्राहकमा परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ।
%%% उपभोक्ताहरू पहिलो अर्डर गर्नु अघि उत्पादन र सेवाको बारेमा अनलाइन समीक्षा पढ्छन्। व्यक्तिहरूको लगभग %०% अघिल्लो ग्राहकहरु बाट एक अनलाइन समीक्षा भरोसा।
42 समीक्षा गर्नुहोस्
प्रतिष्ठा प्रबंधन - आज, अधिक र अधिक व्यवसायहरूले उनीहरूको अनलाइन प्रतिष्ठा प्रबन्धनको महत्त्व बुझ्दछन्। सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू जस्तै फेसबुक, लिंक्डइन, र इन्स्टाग्रामले व्यवसायलाई बहुमूल्य ग्राहकहरूसँग जडान हुन मद्दत गर्दैछ। ब्रान्ड र ग्राहक बीचको सम्बन्ध एक विशिष्ट स्थान को लागी के राम्रो हो को सुदृढीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ।
इमेल मार्केटिङ - ईमेल मार्केटिंग सबैभन्दा प्रभावकारी स्थानीय मार्केटिंग रणनीति हुन जारी छ। यो सानो सुरुवाती व्यवसायहरूमा ठूला ब्रान्डहरू द्वारा समर्थित छ। एक प्रभावी ईमेल अभियान बजार मा तपाइँको ब्रान्ड / व्यापार स्थिति मजबूत गर्न सक्दछ। यसका साथै, ईमेल मार्केटिंगले अवस्थित ग्राहकहरूलाई अनुकूलित सेवाहरू पुर्‍याउने अवसर पनि प्रदान गर्दछ।
पाठ सन्देश मार्केटिंग - एसएमएस मार्केटिंग च्यानल एक सुन्दर दरमा बढ्दैछ र स्थानीय व्यवसायले सment्लग्नता प्याकलाई अग्रसर गर्दछ। एक स्थानीय अफर वा छुट मा तपाइँको ध्यानाकर्षण गर्न तपाइँको मोबाइल उपकरणमा एक सामयिक सन्देश जस्तो केहि छैन।
२०१ 2016 को तुलनामा २ 23% थप व्यक्तिहरूले २०२० मा कम्पनीहरूबाट एसएमएस सन्देशहरू प्राप्त गर्न अप्ट-इन गर्नेछन्। messages२% पाठ सन्देशहरू minutes मिनेट भित्र पढिन्छन्, तर उपभोक्ताहरूले केवल 2020 ईमेलमा प्राप्त गर्ने १ खोल्छन् जुन उनीहरूले प्राप्त गर्दछन्।
स्थानीय निर्देशिका - धेरै उपभोक्ताहरूको एक भरोसा निर्देशिका छ जुन उनीहरूले व्यवसाय खोज्छन्। यो येल्प, गुगल म्याप्स, सिटी सर्च वा अन्य सेवाको खोज हो, तपाईंको ब्यापार स्थान र फोन नम्बरहरू अद्यावधिक राख्दै तपाईंको ग्राहकमा बढि ग्राहकहरू ड्राइभ गर्न सक्छन्।
खोज इन्जिन अनुकूलन - एक छिटो, मोबाइल प्रतिक्रियादायी वेबसाइट को मर्मत गर्ने कि क्षेत्र र ल्याउन्डमार्कहरू समावेश गर्दछ तपाईको प्रत्येक स्थानमा सेवा प्रदान गर्ने खोज ईन्जिन प्रयोगकर्ताहरूले तपाइँको उत्पादन वा सेवाहरूको खोजीमा बढी ध्यान दिनेछ। एउटा प्लेटफर्ममा लगानी गर्नुहोस् जुन तपाइँको प्रत्येक स्थानको लागि तपाइँको स्थानीय खोज र्याकिंगलाई अनुगमन गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
सामाजिक संजाल - एक लक्षित उपस्थिति बनाए र सामाजिक मिडिया मा एक स्थानीय निम्न निर्माण तपाईंको व्यवसाय को लागी स्थानीय यातायात ड्राइव गर्न सक्दछ। ट्वीट, ह्यासट्याग, भिडियो, फोटो, र कथाहरूबाट - सबै च्यानलहरू र सामाजिक मिडिया पोष्टहरूको शैलीहरूको फाइदा लिनुहोस्!
वकालत - सिफारिश छूट प्रस्ताव र अन्य स्थानीय संगठनहरू र व्यवसाय संग साझेदारी गर्न निश्चित गर्नुहोस् वचन को मुख को ड्राइव मद्दत गर्न (पीटीओ) तपाईंको व्यवसायमा मार्केटिंग। सहकर्मीको सिफारिस भन्दा बढि केहि पनि विश्वासिलो हुँदैन जब यो स्थानीय व्यापारको कुरा आउँछ।
र, अवश्य पनि, तपाइँ सान्दर्भिक, निजीकृत, र स्थानीय प्रस्तावहरू प्रदान गरेर तपाईंको अवस्थित ग्राहकहरूलाई फसाउन सक्नुहुन्छ। डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफार्महरू तपाईंलाई अवस्थित ग्राहकहरूलाई पुनः-लक्षित गर्न मद्दतको लागि उत्कृष्ट छ।
बहु-स्थान व्यवसाय चलाउन तपाईंले हस्टलिंग कौशल विकास गर्न आवश्यक छ र कम समयमा कसरी बढी गर्ने भनेर सिक्नुहोस्। मलाई आशा छ कि यी सुझावहरूले तपाईंलाई केही दिशा प्रदान गर्‍यो!
टैग: वकालतइमेल मार्केटिङजियोटारगेटेड विज्ञापनgeotargetingगुगल समीक्षास्थानीय निर्देशिकास्थानीय घटनाहरूस्थानीय बजारस्थानीय खोजीस्थानीय एसईओबहु-स्थानबहु-स्थान व्यवसायअनलाइन समीक्षाप्रतिष्ठा व्यवस्थापनएसईओएसएमएस मार्केटिंगसामाजिक संजालपाठ सन्देश मार्केटिंग
अग्रणी डिजिटल मार्केटिंग कम्पनी एसईओ डिस्कवरीका संस्थापक मनदीप सिंह एसईओ मार्केटि and र डिजिटल बिक्रीको क्षेत्रका अनुभवी अभियानकर्ता हुन्।
अगस्ट 26, 2021 मा 7: 02 AM
यो स्थानीय मार्केटि। रणनीति साझा गर्न को लागी धन्यवाद।
बहु स्थान व्यापार को लागी, हामी उप डोमेन लक्षित गर्नुपर्छ?
तपाइँ के सुझाव दिनुहुन्छ?
सेप्टेम्बर १,, २०११ 13::2021० अपराह्न
नमस्ते पनि, जबकि सबडोमेन बहु स्थान मा काम गर्ने एक तार्किक तरीका हो यदि तपाइँ एक व्यवसाय हो, यो एसईओ को लागी इष्टतम छैन। गूगल मूलतः प्रत्येक उप डोमेन को रूप मा यसको आफ्नै अधिकार भएको व्यवहार गर्दछ ... जसको मतलब तपाइँ स्वतन्त्र रूप मा अनुकूलन र प्रत्येक एकल उप डोमेन को लागी कर्षण (लि via्क को माध्यम बाट) प्राप्त गर्न मा काम गर्न चाहानुहुन्छ। मलाई विश्वास छ कि यो गुगल को भाग मा एक दुर्भाग्यपूर्ण निरीक्षण हो। यस कारणले गर्दा, म प्राय सबडोमेन को सट्टा subfolders को माध्यम बाट चलाउन को लागी बहु स्थान व्यवसायहरु लाई धक्का दिन्छु।